नेपालको सिमाना हामीले मिचेका रहेछौं भन्दै, भारतले गल्ति स्वीकार गर्दै नेपाल सरकारलाइ पठायो यस्तो पत्र ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/नेपालको सिमाना हामीले मिचेका रहेछौं भन्दै, भारतले गल्ति स्वीकार गर्दै नेपाल सरकारलाइ पठायो यस्तो पत्र !
नेपालको सिमाना हामीले मिचेका रहेछौं भन्दै, भारतले गल्ति स्वीकार गर्दै नेपाल सरकारलाइ पठायो यस्तो पत्र !
काठमाडौँ — भारतले कालापानी क्षेत्रको सीमामा समस्या रहेको स्विकार्दै त्यसलाई समाधान गर्न तयार रहेको पत्र नेपाल सरकारलाई पठाएको छ । भारतले आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाल सरकारले विरोधमा कूटनीतिक नोट पठाउनुका साथै वार्ताको प्रस्तावसमेत गरेको थियो । वार्ताको प्रस्तावसहित पठाएको नेपालको पत्रलाई एक महिनापछि भारतले ‘रेस्पोन्स’ गरेको हो ।
यसै साता नेपालस्थित भारतीय दूतावासमार्फत सरकारलाई सम्बोधन गर्दै पठाइएको पत्रमा ‘कालापानी–सुस्ता क्षेत्रको समस्या सल्टाउन भारत तयार रहेको’ उल्लेख छ। वार्ताका लागि नेपालले यसअघि मितिसहितको प्रस्ताव गरे पनि भारतले पठाएको जवाफमा भने मिति उल्लेख छैन। पत्रमा ‘आपसी समझदारीमा उपयुक्त तिथिमा वार्ता गर्ने’ व्यहोरा छ। यसअघि दुवै पक्षले तय गरेको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रबाटै यो विषय हल गर्ने भनिएको छ। नेपालले पठाएको पत्रमा पनि यही संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाएर वार्ता अघि बढाउने उल्लेख थियो।
‘नेपाल र भारतबीचको सिमानामा देखिएको ९८ प्रतिशत समस्या समाधान भएको छ,’ भारतले पठाएको पत्रको आशय उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको समस्या सल्टाउन हामी तयार छौं।’ एक पृष्ठको उक्त पत्रमा सीमा समस्या छिट्टै टुंगो लगाउनुपर्छ भन्नेमा भारत सहमत रहेको उल्लेख छ।
चर्चित बलिउड कलाकार सोनु सुदले गरिदिए ट्युमरपीडित बालिकाको अपरेशन
शिवरात्रीको दिनबाट छोरी बेपत्ता भएपछि आमा रुदै मिडियामा
यात्रुका लागि खुःशीको खबर यति धेरै घट्यो भाडा, यस्तो छ नयाँ भाडादर ?
काठमाडौमा अनौठो शल्यकृया: विरामीलाई बे’होस नपारी मादल बजाउन लगाएर चिकित्कसले चि’रे टा’उको (भिडियो हेर्नुस्)